अफ्रिका फिल्म महोत्सब नेपालमा - समाचार - साप्ताहिक
अफ्रिका फिल्म महोत्सब नेपालमा
कमलपोखरी स्थित रसियन कल्चरल सेन्टरमा ‘छैटौं नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबल–२०१७’ सम्पन्न भएको छ । ३ दिनसम्म चलेको उक्त फेस्टिबलका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका थिए ।
कलेज अफ मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नालिज्मद्धारा आयोजित सो फेस्टिबलमा सो कलेजकी प्रिन्सिपल एवं यस फेस्टिबलकी निर्देशक डा. मञ्जु मिश्रले अफ्रिकालाई अफ्रिकी लेन्सबाटै हेर्न पर्छ भन्ने उदेश्यले बिगत ६ वर्षदेखि आफुहरुले यो महोत्सब आयोजना गर्दै आएको बताईन् ।
सरकारी क्षेत्रबाट हुनु पर्नेमा निजि क्षेत्रबाटै आयोजन हुँदै आएको यो महोत्सबले नेपाल अफ्रिकाका सांस्कृतिक आदन प्रदानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको पनि फेस्टिबल निर्देशक डा. मिश्रले बताईन् । यस पटक अफ्रिकी महाद्धिप र युरोपबाट विभिन्न १५ जना चलचित्रकर्मी सहभागी भएको पनि निर्देशक मिश्रले जानकारी गराईन् ।
ओस्लो युनिभर्सिटी कलेज नर्वेकी प्रोफेसर क्रिस्टिन स्कारे, आफ्रिका रिसर्च सेन्टर कम्युनिकेसन युनिभर्सिटी आफ चाईनाकी पूर्व विभागीय प्रमुख प्रा. ज्याङ याङक्वी, इजिप्टका लुजोर अफ्रिकन फिल्म फेस्टिबल इजिप्टका अध्यक्ष सायद फौएद, लगायतले नेपाल आफ्रिका फिल्म फेस्टिबलको चर्चा गरे ।
आगामी वर्षबाट सहकार्य गर्दै अघि बढ्न महोत्सबको उद्घाटन समारोहमा इजिप्टका लुजोर अफ्रिकन फिल्म फेस्टिबल इजिप्टका अध्यक्ष सायद फौएद र नेपाल अफ्रिका फिल्म फेस्टिबलकी अध्यक्ष डा. मञ्जु मिश्रबीच संयुक्त हस्ताक्षर भयो ।
यस पटक महोत्सबमा नौ ओटा चलचित्र प्रदर्शनी गरिइएको छ ।